Ampitomboy ny CTR amin'ny alàlan'ny fizarana ara-tsosialy | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 28, 2013 Douglas Karr
GetResponse dia nametraka sary iray momba ny fiatraikany amin'ny fizarana ara-tsosialy amin'ny taha tahan'ny tsindry e-mail… ary manaitra ny valiny.
Isan'ny mpampiasa mampiditra ny bokotra fizarana sosialy ao amin'ny mailak'izy ireo nitombo hatramin'ny 18.3% ka hatramin'ny 29.4%. Raha ampitahaina amin'ny valin'ny taon-dasa dia fampitomboana 61% izany. Ny tena mahavariana kokoa dia ny valiny fampisehoana avo lenta indrindra ho an'ireo takelaka misy ny bokotra fizarana sosialy. Ireo mailaka ireo dia nanana salantsalany tsindry Click-through-rate (CTR) 158% ambony noho ny mailaka izay tsy nahitana fizarana sosialy.
Zahao ny sary eto ambany ary sintomy ny tatitra iray manontolo avy amin'ny GetResponse.
Tags: tahan'ny click-throughclick-thru rateFNTmailakamailaka ctrmailaka Marketingmailaka ara-tsosialybokotra sosialySocial Media Marketingfizarana sosialy